Efa dila mantsy ny fotoana ahafahan’izy ireo mitana ireo olona voarohirohy amin’ny raharaha samihafa eo am-pelantanany. Ny fitokonan’ireo mpitsara noho ilay raharaha tany Toliara no nahatonga izao fikatsoana izao.
Voakasika amin’ireo raharaha mahavoasingotra ireo olona voarohirohy ireo ny Fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo, Antsirabe, Ambatolampy, Arivonimamo, Miarinarivo, Ankazobe ary Tsiroanomandidy.
« 48 ora ihany no voalazan’ ny lalana, ahafahanay mitana ireo olona ireo. Efa mandika ny lalàna manan-kery izahay ary manitsakitsaka ny zon’ireo olona ireo raha mbola minia mitana azy ireo. Misy anefa valo andro no nahavoatana azy », hoy ny jly Ravalomanana Richard.
Raha ny nambarany dia « vanim-potoana sarotra ho an’ny filaminana ity herinandro mitsidika ity, indrindra raha mbola manohy ny fitokonany ny mpitsara ». « Na ny olona notanana vonjimaika am-ponja (mandat de dépôt) ko aza, fe-potoana enim-bolana ihany no azo itanana azy », hoy ihany ny kaomandin’ny fari-piadidian’ny zandarimaria eto Antananarivo.
Etsy andanin’izay hatramin’ny nahasamborana ny andian-jiolahy nanafika sy namono nahafaty olona teny Faralaza-Talatamaty dia mba nilamindamina ny eto an-drenivohitra sy ny manodidina, hoy ihany ny mpitandro ny filaminana.